Inqubomgomo Yemfihlo – Ubumfihlo kanye Nemigomo – I-Google
Izinhlaka zokudluliswa kwedatha
Ulwazi i-Google eluqoqayo
Kungani i-Google iqoqa idatha
Izilawuli zakho zobumfihlo
Ukwabelana ngowlazi lwakho
Gcina ulwazi lwakho luvikelekile
Ukukhipha nokususa ulwazi lwakho
Ukugcina ulwazi lwakho
Ukuthobela nokuhambisana nemithetho yokulawula
Mayelana nale nqubomgomo
Izenzo zobumfihlo ezihlobene
Inqubomgomo yobumfihlo ye-Google
Uma usebenzisa amasevisi wethu, usithemba ngolwazi lakho. Siyaqonda ukuthi lona umthwalo omkhulu futhi sisebenza kanzima ukuvikela ulwazi lwakho futhi sikwenze ukwazi ukulilawula.
Le Inqubomgomo Yobumfihlo yenzelwe ukukusiza ukuthi uqonde ukuthi uluphi ulwazi esiluqoqayo, kungani siluqoqa, nokuthi ungabuyekeza kanjani, ukhiphe, futhi ususe ulwazi lwakho.
Ufuna ukushintsha amasethingi wakho obumfihlo?
Yenza ukuhlolwa kobumfihlo
U-Septhemba 30, 2020 osebenzayo | Izinguqulo ezifakwe kwingobo yomlando | Landa i-PDF
Sakha ibanga lamasevisi asiza izigidi zabantu nsuku zonke ukuhlola nokusebenzisana nomhlaba ngezindlela ezintsha. Amasevisi ethu abandakanya:
Izinhlelo zokusebenza ze-Google, amasayithi, amadivayisi, njengosesho, i-YouTube, ne-Google Home
Izingxenyekazi ezifana nesiphequluli se-Chrome nesistimu yokusebenza ye-Android
Imikhiqizo efakwe kwizinhlelo zokusebenza namasayithi aqinisiwe, njengezikhangiso ne-Google Amamephu eshumekiwe
Ungasebenzisa amasevisi ethu ngezindlela ezahlukahlukene ukuphatha ubumfihlo bakho. Isibonelo, ungabhalisela i-akhawunti ye-Google uma ufuna ukudala futhi uphathe okuqukethwe okufana nama-imeyili izithombe, noma ubone imiphumela yosesho ehlobene kakhulu. Futhi ungasebenzisa amasevisi e-Google uma uphumile noma ngaphandle kokudala i-akhawunti, njengosesho ku-Google noma ukubuka amavidiyo e-YouTube. Futhi ungakhetha ukuphequlula iwebhu ngokwemfihlo usebenzisa i-Chrome ngemodi ye-Incognito. Nakuwo wonke amasevisi ethu, ungalungisa izilungiselelo zakho zobumfihlo ukulawula esikuqoqayo nokuthi ulwazi lwakho lusetshenziswa kanjani.
Ukusiza ukuchaza izinto kahle, singeze izibonelo, amavidiyo achazayo, nezincazelo zamagama angokhiye. Uma unemibuzo mayelana nenqubomgomo yobumfihlo, ungakwazi ukuxhumana nathi.
Sifuna ukuthi uqonde izinhlobo zolwazi esiluqoqayo njengoba usebenzisa amasevisi ethu
Siqoqa ulwazi ukuze sihlinzeke ngamasevisi angcono kakhulu kubo bonke abasebenzisi bethu – kusuka ekutholeni izinto eziyinhloko ezifana nokuthi ukhuluma luphi ulimi, kuya kwezinye izinto eziyinkimbinkimbi ezinjengokuthi yiziphi izikhangiso ozozithola zibalulekile, abantu obanaka kakhulu ku-inthanethi, noma ukubuka amavidiyo e-YouTube ongawathanda. Ulwazi i-Google eluqoqayo, nokuthi lolo lwazi lusetshenziswa kanjani, luncike ekutheni siwasebenzisa kanjani amasevisi ethu nokuthi uziphatha kanjani izilawuli zakho zobumfihlo.
Uma ungangenile ngemvume ku-akhawunti ye-Google, silondoloza ulwazi esiluqoqayo ngezihlozi ezehlukile zethu eziboshezelwe kusiphequluli, uhlelo lokusebenza noma idivayisi oyisebenzisayo. Lokhu kusisiza ukwenza izinto ezifana nokunakekela izinketho zakho zolimi kuzo zonke izikhathi zokuphequlula.
Uma ungene ngemvume, futhi siqoqa ulwazi esilulondoloza nge-akhawunti yakho ye-Google, esiluphatha njengolwazi lomuntu siqu.
Izinto ozidalayo noma ozihlinzeka kithi
Uma udala i-akhawunti ye-Google, usinikezela ngolwazi lomuntu siqu olubandakanya igama lakho nephasiwedi. Futhi ungakhetha ukungeza inombolo yefoni noma ulwazi lokukhokha kwi-akhawunti yakho. Ngisho noma ungangenile ngemvume kwi-akhawunti ye-Google, ungakhetha ukusinikeza ngolwazi — njengekheli le-imeyili ukuze uthole izibuyekezo mayelana namasevisi ethu.
Futhi siqoqa okuqukethwe okudalayo, ukulayishe, noma okuthola kusuka kwabanye uma usebenzisa amasevisi ethu. Lokhu kubandakanya izinto ezifana ne-imeyili oyibhalayo noma oyamukelayo, izithombe namavidiyo owalondolozayo, amadokhumenti namaspredishidi owadalayo, namazwana owenzayo kumavidiyo e-YouTube.
Ulwazi esiluqoqayo njengoba usebenzisa amasevisi ethu
Izinhlelo zakho zokusebenza, iziphequluli namadivayisi
Siqoqa ulwazi mayelana nezinhlelo zokusebenza, iziphequluli, namadivayisi owasebenzisayo ukufinyelela amasevisi e-Google, okusisiza sinikezele ngezici ezifana nezibuyekezo zomkhiqizo ezenziwe ngezifiso nokufiphaza isikrini sakho uma ibhethri lehla.
Ulwazi esiluqoqayo lufaka phakathi izihlonzi ezehlukile, uhlobo lwesiphequluli nezilungiselelo, uhlobo lwedivayisi nezilungiselelo, isistimu yokusebenza, ulwazi lwenethiwekhi yeselula ulubandakanya igama lenkampani yenethwekhi nenombolo yefoni, nenombolo yenguqulo yohlelo lokusebenza. Siqoqa ulwazi mayelana nokusebenzisana kwezinhlelo zakho zokusebenza, iziphequluli namadivayisi ngamasevisi ethu, okubandakanya ikheli le-IP, imibiko yokusaphazeka, umsebenzi wesistimu, nedethi, isikhathi, ne-URL yokubhekisa yesicelo sakho.
Siqoqa lolu lwazi uma isevisi ye-Google kudivayisi yakho ixhumana namaseva ethu — isibonelo, uma ufaka uhlelo lokusebenza olosuka esitolo se-Google Play noma uma isevisi ihlola izibuyekezo zangezifiso. Uma usebenzisa idivayisi ye-Android ngezinhlelo zokusebenza ze-Google, idivayisi yakho ixhumana namaseva e-Google ukunikezela ngolwazi mayelana nedivayisi yakho nokuxhuma kumaseva ethu. Lolu lwazi lubandakanya izinto ezifana nohlobo lwedivayisi yakho, igama lenkampani yeselula, imibiko yokusaphazeka nokuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ozifakile.
Siqoqa ulwazi mayelana nomsebenzi wakho kumasevisi ethu, esilusebenzisela ukwenza izinto ezifana nokuncoma ividiyo ye-YouTube ongayithanda. Ulwazi lomsebenzi esiluqoqayo lungabandakanya:
Ukubuka nokusebenzisana nokuqukethwe nezikhangiso
Ulwazi lwezwi noma lomsindo uma usebenzisi izici zomsindo
Abantu oxhumana nabo noma owabelana nabo ngokuqukethwe
Umsebenzi kumasayithi wezinkampani zangaphandle nezinhlelo zokusebenza ezisebenzisa amasevisi ethu
Umlando wokuphequlula we-Chrome owuvumelanise ne-akhawuni yakho ye-Google
Uma usebenzisa amasevisi ethu ukwenza nokwamukela izingcingo nokuthumela nokwamukela imilayezo, singaqoqa ulwazi lwelogu yocingo njengenombolo yefoni, inombolo yomuntu oshayayo, inombolo yomuntu owamukelayo, inombolo yokudlulisela, isikhathi nedethi yazingcingo nemilayezo, ubude besikhathi sezingcingo, ulwazi lwendlela, nezinhlobo zezingcingo.
Ungavakashela i-akhawunti yakho ye-Google ukuthola nokuphatha ulwazi lomsebenzi olulondolozwe kwi-akhawunti yakho.
Iya kwi-akhawunti ye-Google
Ulwazi lwendawo okuyona
Siqoqa ulwazi mayelana nendawo okuyona uma usebenzisa amasevisi ethu, okusisiza sinikezele ngezici ezifana nezinkomba zokushayela zendlela yempelasonto noma izikhathi zokubonisa zama-bayisikobho eduzane nawe.
Indawo okuyona ingacaciswa ngamazinga ahlukayo okuqonda nge-:
Idatha yenzwa esuka kudivayisi yakho
Ulwazi mayelana nezinto eduzane kwedivayisi yakho, njengezindawo zokufinyelela ze-Wi-Fi, amathawa eselula, namadivayisi anikwe amandla i-Bluetooth
Izinhlobo zedatha yendawo esiziqoqayo zincike engxenyeni yedivayisi yakho nezilungiselelo ze-akhawunti. Isibonelo, ungakwazi ukuvula noma uvale indawo yedivayisi yakho ye-Android usebenzisa uhlelo lokusebenza lezilungiselelo zedivayisi. Futhi ungavula Umlando wendawo uma ufuna ukudala imephu eyimfihlo yalapho uya khona namadivayisi akho angene ngemvume.
Kwezinye izimo, i-Google futhi iqoqa ulwazi mayelana nawe olusuka kumithombo efinyeleleka ngokomphakathi. Isibonelo, igama lakho libonakala ephephandabeni langakini, injini yokusesha ye-Google ingafaka leyo athikili futhi iyibonise kwabanye abantu uma basesha igama lakho. Futhi singaqoqa ulwazi mayelana nawe olusuka kozakwethu abathembekile, kufaka phakathi ozakwethu bokumaketha abasinikezela ngolwazi mayelana namakhasimende alungile wamasevisi ebhizinisi lethu, nozakwethu bezokuphepha abasinikezela ngolwazi kuphrojekthi ephikisana nokuhlukumeza. Futhi sithola ulwazi olusuka kubakhangisi ukunikezela ngokukhangisa namasevisi okucwaninga engxenyeni yawo.
Sisebenzisa ubuchwepheshe ukuqoqa futhi silondoloze ulwazi, okubandakanya amakhukhi, amathegi e-pixel, isitoreji sendawo, okufana isitoreji sewebhu sesiphequluli noma izigcinalwazi zedatha yohlelo lokusebenza, izinkomba, kanye namalogo eseva.
Sisebenzisa idatha ukwakha amasevisi angcono
Sisebenzisa ulwazi esiluqoqa kumasevisi akho ngezinhloso ezilandelayo:
Nikezela ngamasevisi ethu
Sisebenzisa ulwazi lwakho ukuletha amasevisi ethu, njengokucubungula amatemu owaseshile ukuze sibuyise imiphumela noma ukukusiza wabelane ngokuqukethwe ngokuphakamisa abamukeli kulabo oxhumana nabo.
Nakekela futhi uthuthukise amasevisi ethu
Futhi sisebenzisa ulwazi ukuqinisekisa ukuthi amasevisi ethu asebenza njengokuhlosiwe, njengokulandela okuphumayo noma izinkinga zokuxazulula ozibikayo kithi. Futhi sisebenzisa ulwazi lwakho ukwenza ukuthuthukisa kumasevisi ethu — isibonelo, ukuqonda ukuthi imaphi amatemu osesho angapelwa kahle ezikhathini eziningi kusisiza ukuthi sithuthukisa izici zethu zokuhlola ukupela kumasevisi ethu.
Thuthukisa amasevisi amasha
Sisebenzisa ulwazi esiluqoqayo kumasevisi akhona ukusisiza ukuthi sithuthukise amasha. Isibonelo, ukuqonda ukuthi abantu bazihlele kanjani izithombe zabo ku-Picasa, uhlelo lokusebenza lwezithombe lokuqala lwe-Google, kusisiza ukuthi sidizayine futhi siqalise izithombe ze-Google.
Ukunikezela ngamasevisi enziwe ngezifiso, kufaka phakathi okuqukethwe nezikhangiso
Sisebenzisa ulwazi esiluqoqayo ukwenza ngezifiso amasevisi ethu kuwe, kufaka phakathi ukunikezela ngezincomo, okuqukethwe okwenziwe ngezifiso, kanye nemiphumela yosesho eyenziwe ngezifiso. Isibonelo, Ukuhlola kokuphepha kunikezela ngamathiphu okuphepha okuthi ungayisebenzisa kanjani imikhiqizo ye-Google. Futhi i-Google Play isebenzisa ulwazi olufana nezinhlelo zokusebenza osuvele uzifakile namavidiyo owabukile ku-YouTube ukuphakamisa izinhlelo zokusebenza ezintsha ongazithanda.
Kuye ngezilungiselelo zakho, singakubonisa izikhangiso ezenziwe ngezifiso ngokususelwe kuzintshisekelo zakho. Isibonelo, uma usetha “amabhayisikili entaba,” ungabona isikhangiso sezemidlalo uma uphequlula isayithi elibonisa izikhangiso ezinikezelwa ku-Google. Ungalawula ukuthi uluphi ulwazi esilusebenzisayo ukukubonisa izikhangiso ngokuvakashela izilungiselelo zakho zezikhangiso.
Asibonisi izikhangiso ezenziwe ngezifiso ngokususelwe ezigabeni ezizwelayo, njengobuhlanga, inkolo ezocansi, noma ezempilo.
Asabelani ngolwazi oluhlonza umuntu siqu nabakhangisi, njengegama lakho noma i-imeyili, ngaphandle kokuthi usicela ukuthi senze kanjalo. Isibonelo, uma ubona isikhangiso sesitolo sezimbali esiseduze futhi ukhetha inkinobho ethi "thepha ukuze ushaye", sizoxhuma ucingo lwakho futhi singabelana ngenombolo yakho yefoni nesitolo sezimbali.
Iya kuzilungiselelo zesikhangiso
Sisebenzisa idatha ukuhlaziya nokulinganisela ukuqonda ukuthi amasevisi ethu asetshenziswa kanjani. Isibonelo, sihlaziya idatha mayelana nokuvakasha kwakho kumawebhusayithi ethu ukwenza izinto ezifana nokuthuthukisa idizayini yomkhiqizo. Futhi sisebenzisa idatha mayelana nezikhangiso osebenzisana nazo ukusiza abakhangisi ukuqonda ukusebenza kwemikhankaso yabo yesikhangiso. Sisebenzisa amathuluzi ahlukahlukene ukwenza lokhu, kufaka phakathi i-Google Analytics. Uma uvakashela amasayithi asebenzisa i-Google Analytics, ikhasimende le-Google nele-Google Analytics lingaxhuma ulwazi mayelana nomsebenzi wakho olusuka kuleyo sayithi elinomsebenzi osuka kwamanye amasayithi asebenzisa amasevisi ethu esikhangiso.
Sisebenzisa ulwazi esiluqoqayo, njengekheli lakho le-imeyili, ukusebenzisana nawe ngqo. Isibonelo, singakuthumela isaziso uma sithola umsebenzi osolisayo, njengomzamo wokungena ngemvume kwi-akhawunti yakho ye-Google osuka endaweni engajwayelekile. Noma singakwazisa ngezinguquko ezizayo noma ukuthuthukisa kumasevisi ethu. Futhi uma uxhumana ne-Google, sizogcina irekhodi lesicelo sakho ukuze lisisize ukuxazulula noma iziphi izinkinga ongahle uhlangabezane nazo.
Vikela i-Google, abasebenzisi bethu, nomphakathi
Sisebenzisa ulwazi ukuthuthukisa ukuphepha nokwethembeka kwamasevisi ethu. Lokhu kubandakanya ukuthola, ukugwema, nokuphendula ebugebengwini, ukuhlukumeza, ubucayi bokuphepha, nezinkinga zokusebenza ezingalimaza i-Google, abasebenzisi bethu, noma umphakathi.
Sisebenzisa ubuchwepheshe obuhlukile ukucubungula ulwazi lwakho kulezi zinhloso. Sisebenzisa amasistimu okuzenzakalelayo ahlaziya okuqukethwe kwakho ukukunikezela ngezinto ezifana nemiphumela yosesho eyenziwe ngezifiso, izikhangiso ezenziwe ngezifiso, noma ezinye izici eziboshezelwe kokuthi uwasebenzisa kanjani amasevisi ethu. Sihlaziya okuqukethwe kwakho ukusisiza sithole ukuhlukumeza okufana nogaxekile, i-malware, okuqukethwe okungekho emthethweni. Futhi sisebenzisa ama-algorithms ukunaka amaphethini edatha. Isibonelo, i-Google Translate isiza abantu ukuxhumana ngazo zonke izilimi ngokuthola imishwana evamile oyicela ukuthi iyihumushe.
Futhi singahlanganisa ulwazi esiluqoqayo kumasevisi ethu nakuwo wonke amadivayisi akho ngezinhloso ezichazwe ngenhla. Isibonelo, uma ubuka amavidiyo wabadlali besiginci ku-YouTube, ungabona isikhangiso sesifundo sesiginci esisebenzisa imikhiqizo yethu yesikhangiso. Kuye ngezilungiselelo zakho ze-akhawunti yakho, umsebenzi wakho kwamanye amasayithi nezinhlelo zokusebenza ungahlotshaniswa nolwazi lwakho lomuntu siqu ukuze kuthuthukiswe amasevisi e-Google kanye nezikhangiso ezilethwa yi-Google.
Uma abanye abasebenzisi sebevele benayo i-imeyili yakho, noma olunye ulwazi olukuhlonzayo, singase sibabonise ulwazi lwe-akhawunti yakho ye-Google ebonakala esidlangalaleni, njengegama nesithombe sakho. Lokhu kusiza abantu ukukhomba i-imeyili evela kuwe, isibonelo.
Sizocela imvume yakho ngaphambi kokusebenzisa ulwazi lwakho ngenhloso engemboziwe kule nqubomgomo yobumfihlo.
Unezinketho ngolwazi esiluqoqayo nokuthi lusetshenziswa kanjani
Lesi sigaba sichaza izilawuli ezinkulu zokuphatha ubumfihlo bakho kumasevisi ethu. Futhi ungavakashela Ukuhlola Kobumfihlo, okunikezela ngethuba lokubuyekeza futhi ulungise izilungiselelo zobumfihlo ezibalulekile. Ngokungeziwe kulawa mathuluzi, futhi sinikezela ngezilungiselelo ezithile zobumfihlo kumikhiqizo yethu — ungafunda kabanzi Kumhlahlandlela wethu Wenqubomgomo Yobumfihlo.
Iya ekuhloleni kobumfihlo
Ukuphatha, ukubuyekeza, nokuthuthukisa ulwazi lwakho
Uma ungene ngemvume, ungahlala ubuyekeza njalo futhi ithuthukise ulwazi lwakho ngokuvakashela amasevisi owasebenzisayo. Isibonelo, izithombe kanye nedrayivu kokubili kudizayinelwe ukusiza ukuphatha izinhlobo ezithile zokuqukethwe okulondoloze nge-Google.
Futhi sakhe indawo ukuze ukwazi ukubuyekeza futhi ulawule ulwazi olulondolozwe kwi-akhawunti yakho ye-Google. I-Akhawunti ye-Google yakho ibandakanya:
Nquma ukuthi iziphi izinhlobo zomsebenzi ongathanda ukuthi zilondolozwe kwi-akhawunti yakho. Isibonelo, ungavula umlando wendawo uma ufuna ukuqagela kwethrafikhi kokuhamba kwakho kwangemihla, noma ungalondoloza umlando wakho wokubuka we-YouTube ukuze uthole iziphakamiso ezingcono zevidiyo.
Phatha izinketho zakho mayelana nezikhangiso eziboniswa kuwe ku-Google nakumasayithi nezinhlelo zokusebenza lezo ezisebenzisana ne-Google ukubonisa izikhangiso. Ungashintsha izintshisekelo zakho, ukhethe ukuthi noma ngabe ulwazi lwakho lusetshenziswe ukwenza izikhangiso ziphathelane kakhulu kuwe, bese uvule noma uvale amanye amasevisi okukhangisa.
Lawula okubonwa abanye mayelana nawe kuwo wonke amasevisi e-Google.
Iya kokuthi Mayelana nawe
Khetha ukuthi ingabe igama lakho nesithombe sephrofayela kuvela eceleni komsebenzi, njengezibuyekezo nezincomo, ezibonakala kwizikhangiso.
Iya kuzincomo ezabiwe
Izindlela zokubuka nokubuyekeza ulwazi lwakho
Okuthi Umsebenzi Wami kukuvumela ukuthi ubuyekeze futhi ulawule uma usebenzisa amasevisi e-Google, njengosesho olwenzile noma ukuvakasha kwakho ku-Google Play. Ungaphequlula ngedethi nangesihloko, uphinde ususe ingxenye noma konke komsebenzi wakho.
Hamba kumsebenzi wami
Ideshibhodi ye-Google ikuvumela ukuthi uphathe ulwazi oluphathelene nemikhiqizo ethile.
Ulazi lwakho lomuntu siqu
Phatha ulwazi lwakho lokuxhumana, njengegama lakho, i-imeyili, nenombolo yefoni.
Iya kulwazi lomuntu siqu
Uma uphumile, ungaphatha ulwazi oluphathelene nesiphequluli sakho noma idivayisi yakho, kufaka phakathi:
Ukwenza ngezifiso usesho oluphuma: Khetha ukuthi ingabe umsebenzi wakho wosesho usetshenziselwe ukukunikezela ngemiphumela nezincomo ezihlobene kakhulu.
Izilungiselelo ze-YouTube: Misa okwesikhashana futhi ususe umlando wosesho we-YouTube wakho kanye nomlando wokubuka we-YouTube wakho.
Izilungiselelo zesikhangiso: Phatha izinketho zakho mayelana nezikhangiso ezoboniswe kuwe ku-Google kanye nakumasayithi nezinhlelo zokusebenza ezisebenzisana ne-Google ukubonisa izikhangiso.
Ukukhipha, ukususa nokusula ulwazi lwakho
Ungakwazi ukukhipha ikhophi yokuqukethwe ku-akhawunti yakho ye-Google uma ufuna ukuyenza isipele noma ukuyisebenzisa ngaphandle kwe-Google.
Khipha idatha yakho
Futhi ungacela ukususa okuqukethwe kusuka kumasevisi e-Google athile ngokususelwe emthethweni osebenzayo.
Ukuze ususe ulwazi lwakho, unga-:
Susa okuqukethwe kwakho okusuka kumasevisi athile e-Google
Useshe futhi ususe izinto ezithile ezisuka kwi-akhawunti yakho usebenzisa okuthi Umsebenzi Wami
Susa imikhiqizo ethile ye-Google, okubandakanya ulwazi lwakho oluphathelene naleyo mikhiqizo
Susa yonke i-akhawunti yakho ye-Google
Susa ulwazi lwakho
Kokugcina, Isiphathi se-akhawunti engasebenzi sokuvumela ukuthi unike othile ukufinyelela ezingxenyeni ze-akhwunti yakho ye-Google uma ungakwazi ukusebenzisa i-akhawunti.
Kunezinye izindlela zokulawula ulwazi i-Google eluqoqayo noma ngabe ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google noma cha, kufaka phakathi:
Izilungiselelo Zesiphequluli: Isibonelo, ungalungisa isiphequluli sakho ukukhombisa uma i-Google isethe ikhukhi kusiphequluli sakho. Futhi ungalungisa isiphequluli sakho ukuthi sivimbele onke amakhukhi asuka kusizinda somphakathi noma zonke izizinda. Kodwa khumbula ukuthi amasevisi ethu ancike kumakhukhi ukuze asebenze kahle, ezintweni ezifana nokukhumbula izinketho zakho zolimi.
Izilungiselelo zeleveli yedivayisi: Idivayisi yakho ingaba nezilawuli ezicacisa ulwazi esliluqoqayo. Isibonelo, ungakwazi ukushintsha izilungiselelo zendawo kudivayisi yakho ye-Android.
Uma wabelana ngolwazi lwakho
Amasevisi ethu amaningi akuvumela ukuthi wabelane ngolwazi nabanye abantu, futhi uyakwawzi ukulawula ukuthi wabelane nobani. Isibonelo, ungabelana ngamavidiyo ku-YouTube esidlangalaleni noma unganquma ukuwagcina ayimfihlo. Khumbula, uma wabelana ngolwazi esidlangalaleni, okuqukethwe kwakho kungafinyeleleka ezinjinini zokusesha, okubandakanya usesho lwe-Google.
Uma ungene ngemvume futhi uhlanganyela namanye amasevisi e-Google, okufana nokushiya amazwana kuvidiyo ye-YouTube noma ukubuyekeza uhlelo lokusebenza ku-Google Play, igama lakho nesithombe sivela eduze komsebenzi wakho. Singaphinda sibonise lolu lwazi kuzikhangiso ngokuya ngesilungiselelo sakho sezincomo ezabiwe.
Uma i-Google yabelana ngolwazi lwakho
Asabelani ngolwazi lwakho oluyimfihlo nezinkampani, izinhlangano, noma abanye abantu ngaphandle kwe-Google ngaphandle kwezimo ezilandelayo:
Sizokwabelana ngolwazi lwakho oluyimfihlo ngaphandle kwe-Google uma sinemvume yakho. Isibonelo, uma usebenzisa i-Google Home ukwenza ukubhukha ngesevisi yokubhukha, sizothola imvume yakho ngaphambi kokwabelana ngegama lakho noma inombolo yefoni nendawo yokudlela. Sizocela imvume yakho ecacile yokuthi sabelane ngolwazi oluyimfihlo oluzwelayo.
Uma ungumfundi noma usebenzela inhlangano esebenzisa amasevisi we-Google, umqondisi wakho wesizinda nabathengisa umkhiqizo okwesibili abaphatha i-akhawunti yakho bazokwazi ukufinyelela ku-akhawunti yakho ye-Google. Bangakwazi:
Ukufinyelela futhi babuyise ulwazi olulondolozwe kwi-akhawunti yakho, njenge-imeyili yakho
Ukubheka izibalo eziqondene ne-akhawunti yakho, njengokuthi zingaki izinhlelo zokusebenza ozifakile
Ukuguqula iphasiwedi ye-akhawunti yakho
Ukumisa okwesikhashana noma avale ukufinyelela kwakho e-akhawuntini yakho
Ukuthola imininingwane ye-akhawunti yakho ukuze kugculiseke imithetho efanele, imigomo, izinqubo zomthetho noma izicelo zokuphatha ezingaphumelela.
Ukukhawuleza amandla akho okususa noma okuhlela ulwazi lwakho kuzilungiselelo zakho zobumfihlo
Ukuze kusebenzeke ngaphandle
Sinikeza ulwazi lomuntu siqu kumanxusa wethu noma amanye amabhizinisi athembekile noma abantu ukuze basicubungulele lona, ngokuya ngemiyalo yethu futhi ngokuhambisana Nomgomo wethu Wobumfihlo kanye nezinye izilinganiso zobumfihlo nokuphepha ezifanele. Isibonelo, sisebenzisa abahlinzeki besevisi ukusisiza ngosekelo lwekhasimende.
Ngenxa yezizathu zomthetho
Izokwabelana ngolwazi lomuntu siqu ngaphandle kwe-Google uma sethemba ukuthi ukufinyelela, ukusebenzisa, ukubeka, noma ukuvezwa kolwazi kubalulekile ukuze:
Hlangane nanoma yimuphi umthetho osebenzayo, ukulawula, inqubo yezomthetho noma izicelo zikahulumeni eziphoqelelwayo. Sabelana ngolwazi mayelana nenombolo nohlobo lwezicelo esizitholayo kusuka kohulumeni Kumbiko Wokukhanyela wethu.
Ukuthi kulandelwe Imigomo Yesevisi, okubandakanya ukuphenywa kokuphulwa komgomo okungenzeka.
Ukuhlonza, ukugwema noma ukubhekana nenkohlakalo ukuphepha noma into yezobuchwepheshe.
Ukuvikela ukulinyazwa kwamalungelo, impahla noma ukuphepha kwe-Google, abasebenzisi bethu noma umphakathi njengoba kuvunyelwe ngokomthetho.
Singabelana ngolwazi olukombekayo okungelona lomuntu siqu esidlangalaleni futhi nabozakwethu — njengabashicileli, abakhangisi, onjiniyela, noma abaphathi bamalungelo. Isibonelo, sabelana ngolwazi esidlangaleleni ukubonisa amathrendi mayelana noksebenza okuvamile kwamasevisi ethu. Futhi sivumela ozakwethu abathile ukuqoqa ulwazi olusuka kusiphequluli sakho noma idivayisi yokukhangisa nezinhloso zokulinganisa basebenzisa amakhukhi wabo noma ubuchwepheshe obunjalo.
Uma i-Google ibandakanyeke ekubumbaneni, ukuthathwa noma ukudayiswa kwempahla, siyoqhubeka siqinisekisa ukuthi ubumfihlo banoma imiphi imininingwane yabantu buyagcinwa bese sinikeza abasebenzisi abathintekayo isaziso ngaphambili kokuthi imininingwane yabantu idluliswe noma ithinteke emgomeni wobumfihlo owehlukile.
Sakha ukuphepha kumasevisi ethu ukuvikela ulwazi lwakho
Yonke imikhiqizo ye-Google yakhiwe ngezici zokuphepha eziqinile ezivikela ulwazi lwakho. Imininingwane esiyitholayo esuka ekunakekeleni amasevisi ethu isisiza ukuthi sithole futhi sivimbele ngokuzenzakalelayo okusongela ukuphepha ukuthi kungakufinyeleli. Futhi uma sithola okuthile okubucayi esicabanga ukuthi kufanele wazi ngakho, sizokaziwa futhi sikuyale ukuthi uthathe ziphi izinyathelo ukuze uhlale uvikeleke ngcono.
Sisebenza kanzima ukuvikela wena ne-Google kusuka ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ukushintsha, ukuveza, noma ukuphazamisa ulwazi esliphethe kufaka phakathi:
Sisebenzisa ukubethela ukugcina idatha yakho iyimfihlo ngenkathi ihamba
Sinikezela ngebanga lezici zokuphepha, Njengokuphequlula Okuphephile, Ukuhlola Kokuphepha, kanye nokuqinisekiswa okuyizinyathelo ezimbili ukusiza ukuvikela i-akhawunti yakho
Sibuyekeza ukuqoqa kwethu ulwazi, ukuziphatha kokugcina nokucubungula, okufaka phakathi izimiso zokuphepha, ukuze sigweme ukufinyelela okungagunyaziwe kumasistimu.
Sikhawulela ukufinyelela kulwazi lomuntu siqu kubasebenzi be-Google, osonkontileka, nabasebenzeli abadinga ulwazi ukuze balucubungule. Noma ubani onalokhu kufinyelela ukhonjelwe emithethweni eqinile yobimfihlo futhi angaqondiswa izigwegwe noma anqanyulwe uma ehluleka ukuhlangabezana naleyo mithetho.
Ungakhipha ikhophi yolwazi lwakho noma ulususe kusuka ku-akhawunti yakho ye-Google noma kunini
Sigcina idatha esiyiqoqayo kusuka ngezikhathi ezahlukahlukene kuye ngokuthi iyini, siyisebenzisa kanjani, nokuthi uzilungisa kanjani izilungiselelo zakho:
Enye idatha ungayisusa noma kunini uma uthanda, njengokuqukethwe okudalayo noma okulayishayo. Ungaphinda ususe ulwazi lomsebenzi olulondolozwe ku-akhawunti yakho, noma ukhethe ukuthi lususwe ngokuzenzakalela ngemuva kwesikhathi esisethiwe.
Enye idatha iyasuswa noma yenziwe ukuthi ingaziwa ngokuzenzakalela ngemuva kwesikhathi esisethiwe, njengedatha yokukhangisa kumalogu eseva.
Sigcina enye idatha uze ususe i-akhawunti yakho ye-Google, njengolwazi mayelana nokuthi uwasebenzisa kanjani amasevisi ethu.
Futhi enye idatha esiyigcinayo izikhathi ezinde uma kudingeka ngebhizinisi elifanelekile noma izinhloso zezomthetho, njengokuphepha, ubugebengu nokuvikela ukuhlukumeza, noma ukugcina amarekhodi.
Uma ususa idatha silandela inqubo yokususwa ukuze senze isiqiniseko sokuthi idatha yakho iphephile futhi isuswe ngokugcwele kusukela kumasevisi ethu noma igcinwa ngefomu elenziwe langaziwa. Sizama ukuqinisekisa ukuthi amasevisi ethu avikela ulwazi kusuka ekususweni ngengozi noma okungalungile. Ngendla yalokhu, kungenzeka kube nokubambezeleka phakathi kwesikhathi osusa ngaso okuthile nesikhathi lapho amakhophi asuswa kusuka kumasistimu ethu esipele.
Ungafunda kabanzi mayelana nezikhathi zokugcina idatha ye-Google, kufaka phakathi ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi sisuse ulwazi lwakho.
Sibuyekeza njalo le nqubomgomo yobumfihlo futhi siqinisekisa ukuthi sicubungula ulwazi lwakho ngezindlela ezihambisana nalo.
Siphethe amaseva asemhlabeni wonke futhi ulwazi lwakho lungase lucutshungulwe kumaseva angaphandle kwezwe lapho uhlala khona. Imithetho yokuvikelwa kwedatha iyahluka phakathi kwamazwe, ngenkathi amanye anikeza ukuvikela okuningi kunamanye. Kungakhathaliseki ukuthi ulwazi lwakho lucutshungulwa kuphi, sifaka ukuvikela okufanayo okuchazwe kule nqubomgomo. Siphinde futhi sithobele izinhlaka ezithile ezingokomthetho ezihlobene nokudluliswa kwedatha.
Uma sithola izikhalazo ezibhaliwe, siphendula ngokuxhumana nomuntu owenze isikhalazo. Sisebenzisana neziphathimandla zokulawula ezifanele, okubandakanya iziphathimandla zendawo ezivikela imininingwane, ukuxazulula izikhalazo ezimayelana nokudluliswa kwedatha yakho esingakwazi ukuthi sizixazulule ngqo nawe.
I-California Consumer Privacy Act (CCPA) idinga ukuveza ulwazi oluthile lwabahlali base-California.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo idizayinelwe ukukusiza uqonde ukuthi i-Google iluphatha kanjani ulwazi lwakho:
Sichaza izigaba zolwazi i-Google eliqoqayo nemithombo yalolo lwazi Kulwazi i-Google eluqoqayo.
Sichaza ukuthi i-Google ilusebenzisa kanjani ulwazi kokuthi kungani i-Google iqoqa idatha.
Sichaza lapho i-Google ingabelana khona ngolwazi kokuthi Ukwabelana ngolwazi lwakho. I-Google ayithengisi ulwazi lwakho siqu.
I-CCPA iphinda inikeze ilungelo lokucela ulwazi olumayelana nokuthi i-Google iluqoqa kanjani, ilusebenzise kanjani, futhi iluveza kanjani ulwazi lwakho siqu. Futhi ikunikeza ilungelo lokufinyelela ulwazi lwakho iphinde icele i-Google ukuthi isuse lolo lwazi. Okokugcina, i-CCPA inikeza ilungelo lokungabandlululwa ngokusebenzisa amalungelo akho obumfihlo.
Sichaza izinketho onazo ukuze uphathe ubumfihlo bakho nedatha kumasevisi e-Google onkana Kuzilawuli zakho zobumfihlo. Ungasebenzisa amalungelo akho ngokusebenzisa lezi zilawuli, ezikuvumela ukuthi ufinyelele, ubuyekeze, uphinde ususe ulwazi lwakho, uphinde uthumele uphinde ulande ikhophi yalo. Uma uwasebenzisa, sizoqonisekisa isicelo sakho ngokuqinisekisa ukuthi ungene ngemvume ku-Akhawunti yakho ye-Google. Uma unemibuzo noma izicelo ezihambisana namalungelo akho ngaphansi kwe-CCPA, ungaphinda (noma umenzeli wakho ogunyaziwe) naye angaxhumana ne-Google.
I-CCPA idinga incazelo yemikhuba yedatha kusetshenziswa izigaba ezithile. Leli thebula lisebenzisa lezi zigaba ukuze libone ulwazi kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Izigaba zolwazi lomuntu siqu esiluqoqayo
Izinkomba ezifana negama, inombolo yefoni, nekheli, kanye nezinkomba ezihlukile eziboshezelwa kusiphequluli, uhlelo lokusebenza, noma idivayisi oyisebenzisayo.
Ulwazi lokubalwa kohlobo lwabantu, olufana neminyaka yakho yobudala, ubulili kanye nolimi.
Ulwazi lwezentengiso olufana nolwazi lwakho lokukhokha kanye nomlando wokuthenga okwenza kumasevisi e-Google.
Ulwazi lwe-biometric uma ukhetha ukulinikeza, njengezigxivizo zeminwe kuzifundo zokuthuthukiswa komkhiqizo we-Google.
I-inthanethi, inethiwekhi, nolunye ulwazi lomsebenzi olufana namatemu akho osesho, ukubukwa nokuhlanganyela nokuqukethwe nezikhangiso; umlando wokuphequlula we-Chrome owuvumelanise ne-Akhawunti yakho ye-Google; ulwazi olumayelana nokuhlanganyela kwezinhlelo zakho zokusebenza, iziphequluli, namadivayisi namasevisi ethu (njengekheli lasesizindeni se-inthanethi, imibiko yokuphahlazeka, nomsebenzi wesistimu); nomsebenzi kumasayithi ezinkampani zangaphandle nezinhlelo zokusebenza ezisebenzisa amasevisi ethu. Ungabuyekeza uphinde ulawule idatha yomsebenzi ogcinwe ku-Akhawunti yakho ye-Google kokuthi i-Akhawunti Yami.
Idatha ye-geolocation, efana naleyo enganqunywa i-GPS, ikheli lasesizindeni se-inthanethi, nenye idatha kusukela kuzinzwa ezikudivayisi yakho noma eduze nayo, ngokuya ngengxenye yamasethingi edivayisi yakho nawe-akhawunti. Funda kabanzi mayelananokusetshenziswa kolwazi lwendawo i-Google.
Ulwazi lomsindo, olwe-electronic, olubonakalayo nolufanayo, olufana nolwazi lwendawo nolomsindo uma usebenzisa izici zomsindo.
Ulwazi lobuchwepheshe bomsebenzi, olwemisebenzi, nolwezemfundo, olufana nolwazi olunikezayo noma lolo olugcinwa nge-akhawunti ye-G Suite inhlangano ofunda noma osebenza kuyo.
Olunye ulwazi oludalayo noma olunikezayo, olufana nokuqukethwe okudalayo, okulayishayo, noma okutholayo (njengezithombe namavidiyo noma ama-imeyili, amadokhumenti kanye namaspredishithi). Ideshibhodi ye-Google ikuvumela ukuthi uphathe ulwazi oluhambisana nemikhiqizo ethile.
Ama-Inference akhishwe kusukela kokungaphezulu, njengezigaba zakho zentshisekelo yezikhangiso.
Izinjongo zebhizinisi lapho ulwazi lungasetshenziswa noma luvezwe khona
Ukuvikela kuzinsongo zokuvikelwa, ukuhlukunyezwa, nomsebenzi ongekho emthethweni: I-Google isebenzisa futhi ingaveza ulwazi ukuze ithole, ivimbele iphinde iphendule kuzehlakalo zokuvikelwa, kanye nokuvikela komunye umsebenzi onobungozi, okhohlisayo, ongumgunyathi, noma ongekho emthethweni. Isibonelo, ukuze kuvikelwe amasevisi ethu, i-Google ingathola noma idalule ulwazi olumayelana namakheli asesizindeni se-inthanethi abalingisi abanobungozi okungenzeka bawonakalisile.
Ukuhlolwa nokulinganisa: I-Google isebenzisa ulwazi lwezibalo nokulinganiswa ukuze iqonde ukuthi amasevisi ethu asetshenziswa kanjani, kanye nokugcwalisa izivumelwano ezibhalwe phansi kozakwethu njengabashicileli, abakhangisi, onjiniyela, noma abaphathi bamalungelo. Singadalula ulwazi olungakhombi umuntu siqu esidlangalaleni nalaba bozakwethu, okufaka izinjongo zokuhlola.
Ukugcina amasevisi ethu: I-Google isebenzisa ulwazi ukuze iqinisekise ukuthi amasevisi ethu asebenza njengoba aqondiwe, njengokulandelela ukucisha noma ukuxazulula izinkinga zeziphazamisi noma ezinye izinkinga ozibika kithi.
Ucwaningo nokuthuthukiswa: I-Google isebenzisa ulwazi ukuze ithuthukise amasevisi ethu iphinde ithuthukise imikhiqizo emisha, izici nobuchwepheshe obuzuzisa abasebenzisi bethu nomphakathi. Isibonelo, sisebenzisa ulwazi olutholakala esidlangalaleni ukuze sisize ukuqeqesha amamodeli olimi e-Google siphinde sakhe isici ezifana ne-Google Translate.
Ukusetshenziswa kwabahlinzeki besevisi: I-Google yabelana ngolwazi nabahlinzeki besevisi ukuze yenze amasevisi yenzela thina, ngokuthobelana nokuthi Inqubomgomo Yobumfihlo yethu kanye nobunye ubumfihlo obufanelekile nezindlela zokuvikela. Isibonelo, singathembela kubahlinzeki besevisi ukuze sisize ukunikeza usekelo lwekhasimende.
Ukukhangisa: I-Google icubungula ulwazi, olufaka izinkomba eziku-inthanethi nolwazi olumayelana nokuhlanganyela kwakho nezikhangiso, ukuze kunikezwe ukukhangisa. Lokhu kugcina amasevisi e-Google kanye namawebhusayithi amaningi namasevisi owasebenzisayo amahhala. Ungalawula ukuthi iluphi ulwazi esilusebenzisayo ukuze sibonise izikhangiso zakho ngokuvakashela izilungiselelo zakho zesikhangiso.
Izizathu zomthetho: I-Google iphinda isebenzise ulwazi ukuze inelise imithetho esebenzayo noma ukuqondiswa, iphinda idalule ulwazi ngokuphendula kunqubo yezomthetho noma izicelo ezisebenzisekayo zikahulumeni, okufaka ukusetshenziswa komthetho. Sinikeza ulwazi olumayelana nenombolo nohlobo lwezicelo esizithola kusukela kohulumeni Kumbiko wethu Wokubonisa Ngale.
Izinhlangothi ulwazi olungabiwa nazo
Abanye abantu ongakhetha ukwabelana nabo ulwazi lwakho, olufana namadokhumenti noma izithombe, namavidiyo noma amazwana ku-YouTube.
Izinkampani zangaphandle ovumelane nazo ukwabelana ngolwazi lwakho, olufana namasevisi ahlanganiswa namasevisi e-Google. Ungabuyekeza uphinde uphathe izinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle namasayithi ngokufinyelela kudatha eku-Akhawunti yakho ye-Google.
Abahlinzeki besevisi, amabhizinisi athenjwayo noma abantu abacubungula ulwazi benzela i-Google, kusukela kumiyalelo yethu nangokuthobelana Nenqubomgomo Yobumfihlo kanye nanoma iziphi ezinye izimiso ezifanelekile zobumfihlo nezokuvikelwa.
Abaqondisi besizinda, uma usebenza noma ufunda kunhlangano esebenzisa amasevisi e-Google afana ne-G Suite.
Izisebenzi zezomthetho noma ezinye izinkampani zangaphandle, ngezizathu zezomthetho ezichazwe Ekwabelaneni kwakho kolwazi.
Uma le nqubomgomo isebenza
Le nqubomgomo yobumfihlo isebenza kuwo wonke amasevisi anikezelwa i-Google LLC kanye namancusa ayo, kufaka phakathi i-YouTube, Android, namasevisi anikezelwa kumasayithi ezinkampani zangaphandle, okufana namasevisi okukhangisa. Le nqubomgmo yobumfihlo ayisebenzi kumasevisi anezinqubomgomo zobumfihlo ezehlukile ezingafaki le nqubomgmo yobumfihlo.
Le nqubomgomo ayisebenzi:
Izenzo zolwazi zezinye izinkampani nezinhlangano ezikhangisa amasevisi ethu
Amasevisi anikezelwa ezinye izinkampani noma umuntu ngamunye, kufaka phakathi imikhiqizo noma amasayithi angabandakanya amasevisi e-Google, angaboniswa kuwe kumiphumela yosesho, noma ixhunywe kusuka kumasevisi ethu
Ushintsho kule nqubomgomo
Sishintsha le nqbomgomo yobumfinhlo njalo. Ngeke sinciphise amalungelo akho ngaphansi Komgomo Wobumfihlo ngale kokuthola imvume yakho ecacile. Sihlala sikhombisa idethi ushintsho lokugcina olwenzeka ngayo lapho sishicilele futhi sanikezela ngokufinyelela kwizinguquko ezikwingobo yomlando ukuze ubuyekeze. Uma ushintsho lubalulekie, sizonikezela ngesaziso esifaneleke kakhulu (kufaka phakathi, kwamanye amasevisi, isaziso se-imeyili soshintsho lwequbomgomo yobumfihlo).
Amasevisi athile e-Google
Izaziso zobumfihlo ezilandelayo zinikezela ngolwazi olungeziwe mayelana namanye amasevisi e-Google:
I-Chrome nesistimu yokusebenza ye-Chrome
I-G Suite for Education
Ama-akhawunti e-Google aphethwe ngesixhumanisi somndeni, ezinganeni ezingaphansi kuka-13 (noma ubudala obusebenzayo ezweni lakho)
Iqoqo lezwi nomsindo kusuka kuzici zezingane kumsizi we-Google
Eminye imithombo elusizo
Izixhumanisi ezilandelayo zigqamisa izisetshenziswa ezilusizo kuwe ukuze ufunde kabanzi mayelana nezenzo zethu nezilungiselelo zobumfihlo.
I-akhawunti yakho ye-Google iyikhaya kuzilungiselelo eziningi ungazisebenzisela ukuphatha i-akhawunti yakho
Ukuhlola Kobumfihlo kukuyalela kuzilungiselelo zobumfihlo ezingokhiye ze-akhawunti yakho ye-Google
Isikhungo sokuphepha se-Google sikusiza ukuthi ufunde kabanzi nokuphepha kwethu okwakhelwe ngaphakathi, izilawuli zangasese, namathuluzi ukusiza ukwakha imithetho yedijithali yomndeni wakho ku-inthanethi
Ubumfihlo nemigomo kunikezela ngokuqonda okuningi mayelana nale nqubomgomo yobumfihlo nemigomo yethu yesevisi
Ubuchwepheshe bufaka phakathi ulwazi olubanzi ngokulandelayo:
Ubuchwepheshe obusetshenziselwa Ukukhangisa
I-Google ikusebenzisa kanjani ukunakwa kwephethini ukubona izinto ezifana nobuso ezithombeni
Ikhukhi yifayela elincane eliqukethe umucu wezinhlamvu ezithunyelwa kwikhompyutha yakho lapho uvakashela iwebhusayithi. Uma uvakashela isayithi futhi, ikhukhi livumela lelo sayithi ukuthi libone isiphequluli sakho. Amakhukhi angase agcine okuthandwayo komsebenzisi kanye nokunye ukwaziswa. Ungalungiselela isiphequluli sakho ukuze sale onke amakhukhi noma sibonise uma ikhukhi lithunyelwa. Noma kunjualo, ezinye izici zewebhusayithi noma amasevisi angase angasebenzi kahle ngaphandle kwamakhukhi. Funda kabanzi mayelana nokuthi i-Google isebenzisa kanjani amakhukhi nokuthi i-Google isebenzisa kanjani idatha, okufaka amakhukhi, uma usebenzisa amasayithi ozakwethu noma izinhlelo zokusebenza.
Njengamawebhusayithi amaningi, amaseva ethu arekhoda ngokuzenzakalelayo izicelo zekhasi ezenziwe lapho uvakashela amasayithi ethu. Lawa “malogi eseva” ngokuvamile ahlanganisa isicelo sakho sewebhu, ikheli lePhrothokholi ye-Inthanethi, uhlobo lwesiphequluli, ulimi lwesiphequluli, idethi kanye nesikhathi sesicelo sakho kanye nekhukhi eyodwa noma angeziwe angase athole isiphequluli sakho.
Ukufakwa kwelogi okujwayelekile kosesho "kwezimoto" kufana nalokhu:
123.45.67.89 ingabe ikheli lasesizindeni se-inthanethi linikezwe kumsebenzisi i-ISP yomsebenzisi. Ngokuya ngesevisi yomsebenzisi, ikheli elihlukile linganikezwa kumsebenzisi umhlinzeki wakhe wesevisi njalo uma exhumeka ku-inthanethi.
25/Mar/2003 10:15:32 idethi nesikhathi sombuzo.
http://www.google.com/search?q=cars i-URL eceliwe, efaka umbuzo wosesho.
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 isiphequluli nesistimu yokusebenza esetshenziswayo.
740674ce2123a969 ikhukhi elihlukile le-ID elinikezwe kule khompuyutha ethile ngesikhathi sokuqala lapho ivakashele khona i-Google. (Amakhukhi angase asuswe abasebenzisi. Uma umsebenzisi asuse ikhukhi kusukela kukhompuyutha kusukela ngesikhathi sokugcina lapho avakashele khona i-Google, kuzoba ikhukhi elihlukile le-ID elinikezwa kudivayisi yabo ngesikhathi esilandelayo lapho avakashela khona i-Google kusukela kuleyo divayisi ethile).
Inxusa ibhizinisi okungeleqembu lezinkampani ze-Google, okufaka izinkampani ezilandelayo ezinikeza amasevisi ekhasimende e-EU: i-Google Commerce Ltd, Google Payment Corp, ne-Google Dialer Inc. Funda kabanzi mayelana nezinkampani ezinikeza amasevisi ebhizinisi e-EU.
Ungafinyelela kwamanye amasevisi ethu ngokubhalisela i-akhawunti ye-Google nangokusinikeza ngolunye ulwazi lomuntu siqu (ngokuvamile igama lakho, ikheli le-imeyili, nephasiwedi). Lolu lwazi lwe-akhawunti lusetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi unguwe uma ufinyelela kumasevisi e-Google kanye nokuvikela i-akhawunti yakho kusukela ekufinyelelweni okungagunyaziwe abanye. Ungahlela noma ususe i-akhawunti yakho noma kunini ngezilungiselelo ze-akhawunti yakho ye-Google.
Inqubo noma isethi yezimiso ezilandelwa ikhompuyutha ekwenzeni imisebenzi exazulula inkinga.
I-referrer URL (Uniform Resource Locator) ulwazi oludluliselwa kukhasi lewebhu okuyiwa kulo isiphequluli sewebhu, ngokuvamile uma uchofoza isixhumanisi esiya kulelo khasi. I-referrer URL iqukethe i-URL yekhasi lewebhu lokugcina isiphequluli esilivakashele.
Idivayisi ikhompuyutha engasetshenziselwa ukufinyelela kumasevisi e-Google. Isibonelo, amakhompuyutha edeskithophu, izipikha ezihlakaniphile, nama-smartphone konke lokhu kuthathwa njengamadivayisi
Yonke idivaiyisi exhumeke ku-inthanethi inikwe inombolo eyaziwa ngekheli le-Internet protocol (IP). Lezi zinombolo ngokuvamile zinikwa ngamabhulokhu wendawo. Ikheli le-IP kwesinye isikhathi lingasetshenziselwa ukukhomba indawo kusuka lapho idivayisi ixhumeke khona ku-inthanethi.
Inqolobane yedatha yohlelo lokusebenza
Inqolobane yedatha yohlelo lokusebenza iyisilondolozi sedatha kudivayisi. Ingakwawzi, isibonelo, ukunika amandla uhlelo lokusebenza lewebhu ukusebenza ngaphandle kokuxhumana kwe-intanethi futhi ithuthukise ukusebenza kohlelo lokusebenza ngokunika amandla ukulayisha okusheshayo kokuqukethwe.
Isitoreji sesiphequluli sewebhu
Isitoreji sewebhu sesiphequluli sinika amandla amawebhusayithi ukulondoloza idatha kusiphequluli kudivayisi. Uma sisetshenziswa kumodi "yesitoreji sasendaweni", sinika amandla idatha ukuthi igcinwe kumaseshini onkana. Lokhu kwenza idatha itholakale nangemuva kokuthi isiphequluli sivaliwe saphinde savulwa. Obunye ubuchwepheshe obusiza isitoreji sewebhu i-HTML 5.
Umaka wephikiseli uhlobo lobuchwepheshe obubekwa kuwebhusayithi noma ngaphakathi komzimba we-imeyili ngezinjongo zokulandelela umsebenzi othile, ofana nokubukwa kwewebhusayithi noma uma i-imeyili ivuliwe. Omaka be-Pixel bavamise ukusetshenziswa behlanganiswe namakhukhi.
Inkomba ehlukile iyunithi yezinhlamvu engasetshenziswa ukuze ikhombe ngokuhlukile isiphequluli, uhlelo lokusebenza noma idivayisi. Izinkomba ezihlukile ziyahluka ngokuthi zingunaphakade kangakanani, uma ngabe zingasethwa kabusha abasebenzisi, nokuthi zingafinyelelwa kanjani.
Izinkomba ezihlukile zingasetshenziselwa izinjongo ezihlukile, ezifaka ukuvikelwa nokutholwa kokukhwabanisa, amasevisi okuvumelanisa afana nebhokisi lokungenayo lakho le-imeyili, kukhunjulwa okuncamelayo kwakho, nokunikezwa kokukhangisa okwenziwe kwaba ngekwakho. Isibonelo, izinkomba ezihlukile ezigcinwe kumakhukhi zisiza amasayithi abonise okuqukethwe kusiphequluli sakho ngolimi lwakho oluncanyelwayo. Ungalungiselela isiphequluli sakho ukuze sale onke amakhukhi noma sibonise uma ikhukhi lithunyelwa. Funda kabanzi mayelana nokuthi i-Google iwasebenzisa kanjani amakhukhi.
Kwezinye izinkundla ngaphandle kweziphequluli, izinkomba ezihlukile zisetshenziselwa ukubona idivayisi ethile noma uhlelo lokusebenza kuleyo divayisi. Isibonelo, inkomba ehlukile efana ne-ID yokukhangisa isetshenziselwa ukunikeza ukukhangisa okuhambisanayo kumadivayisi e-Android, futhi ingaphathwa kuzilungiselelo zedivayisi yakho. Izinkomba ezihlukile zingaphinda zihlanganiswe nedivayisi umkhiqizi wayo (kwesinye isikhathi okubizwa nge-ID ehlukile emhlabeni wonke noma i-UUID), ofana nenombolo ye-IMEI yefoni yeselula. Isibonelo, inkomba ehlukile yedivayisi ingasetshenziselwa ukwenza ngendlela oyifisayo amasevisi ethu kudivayisi yakho noma ihlaziye izinkinga zedivayisi ezihlobene namasevisi ethu.
Ulwazi lomuntu siqu olunozwela
Lolu uhlobo lolwazi lomuntu siqu oluhlobene nezihloko ezifana nezindaba ezingamaqiniso zempilo eziyimfihlo, zobuhlanga noma ubuzwe, izinkolelo zombusazwe noma zenkolo noma ubulili.
Lolu ulwazi olurekhodwa mayelana nabasebenzisi ukuze lingasabonisi noma lukhombe umsebenzisi oyedwa ongakhonjwa.
Ulwaziswa lomuntu siqu
Lolu ulwazi olunikeza kithi olukhomba wena siqu, olufana negama lakho, ikheli le-imeyili, noma ulwazi lokukhokha, noma enye idatha engaxhunywa ngokuzwakalayo kulwazi olunjalo lwe-Google, olufana nolwazi esiluhlobanisa ne-akhawunti yakho ye-Google.
abantu ababaluleke kakhulu kuwena kwi-intanethi
Isibonelo, uma uthayipha ikheli endaweni ye-To, Cc, noma ye-Bcc ye-imeyili oyibhalayo, i-Gmail izophakamisa amakheli ngokususelwe ebantwini oxhumana nabo kakhulu.
Isibonelo, singasebenzisa ulwazi olusuka kumadivayisi akho ukukusiza ukuthi unqume ukuthi iyiphi idivayisi ongathanda ukuyisebenzisa ukufaka uhlelo lokusebenza noma ukubuka i-movie oyithenga ku-Google Play. Futhi sisebenzisa lolu lwazi ukusiza ukuvikela i-akhawunti yakho.
Isibonelo, sisebenzisa izikhungo zedatha emhlabeni wonke ukusiza sigcine imikhiqizo yethu itholakalela abasebenzisi.
Isibonelo, ungasusa ibhulogi yakho ku-Blogger noma isayithi le-Google elakho emasayithi e-Google. Futhi ungasusa izibuyekezo ozishiye kuzinhlelo zokusebenza, amageyimu, nokunye okuqukethwe esitolo e-Google Play.
amasevisi okukhangisa nokucwaninga engxenyeni yawo
Isibonelo, abakhangisi bangalayisha idatha esuka kwizinhlelo zabo zamakhadi okuthembeka ukuze bakwazi ukuqonda ngangcono ukusebenza kwemikhankaso yabo yezikhangiso. Sinikezela kuphela ngemibiko ehlanganisiwe kubakhangisi abangabonisi ulwazi mayelana nomuntu ngamunye.
amasevisi okwenza nokwamukela izingcingo noma ukuthumela nokwamukela imilayezo
Izibonelo zalamasevisi zibandakanya:
I-Google Hangouts, yokwenza amakholi endawo namazwe
I-Google Voice, yokushaya izingcingo, ukuthumela imilayezo, nokuphatha ivoyisimeyili
I-Google Fi, yecebo lefoni
I-Google Analytics incike kumakhukhi enkampani yokuqala, okusho ukuthi amakhukhi asethwa ikhasimende le-Google Analytics. Ngokusebenzisa amasistimu ethu, idatha edalwe nge-Google Analytics ingaxhunywa nekhasimende le-Google Analytics ne-Google kunangamakhukhi wenkampani yangaphandle aphathelene nokuvakasha kwamanye amawebhusayithi. Isibonelo, umkhangisi angafuna ukusebenzisa idatha yakhe ye-Google Analytics ukudala izikhangiso eziphathelene kakhulu, noma ukuhlaziya ngokuthuthukile kuthrafikhi. Funda kabanzi
Uma abantu abaningi beqala ukusesha okuthile, ingabanikezela ngolwazi olusizayo kakhulu mayelana namathrendi athile ngaleso sikhathi. I-Google Trends isampula usesho lwewebhu lwe-Google ukulinganisela ukuduma kosesho esikhathini esithile futhi yabelane ngaleyo miphumela esidlanganaleni ngemigomo ebaliwe. Funda kabanzi
hlanganisa ulwazi esiluqoqayo
Ezinye izibonelo zokuthi siluhlanganisa kanjani ulwazi esiluqoqayo zibandakanya:
Uma ungene ngemvume kwi-akhawunti yakho ye-Google futhi usesha ku-Google, ungabona imiphumela yosesho evela kuwebhu yomphakathi, kanye nolwazi oluphathelene oluvela kokuqukethwe onako kweminye imikhiqizo yakho ye-Google, njenge-Gmail noma i-Google Khalenda. Lokhu kungabandakanya izinto ezifana nesimo sezindiza zakho ezizayo, izindawo zokudla, nokubhukha kwehhotela, noma izithombe zakho. Funda kabanzi
Uma uke wakhuluma nothile nge-Gmail futhi ufuna ukumengeza kwi-Google Dokhumenti noma umcimbi ku-Google Khalenda, i-Google yenza kubelula ukwenza kanjalo ngokuqedela ngokuzenzakalela ikheli lakhe le-imeyili uma uqala ukuthayipha igama lakhe. Lesi sici senza kubelula ukwabelana ngezinto nabantu obaziyo. Funda kabanzi
Uhlelo lokusebenza lwe-Google lungasebenzisa idatha oyilondoloze kweminye imikhiqizo ye-Google ukukubonisa okuqukethwe okwenziwe ngezifiso, kuye ngezilungiselelo zakho. Isibonelo, uma unosesho olulondoloze kumsebenzi wewebhu nohlelo lokusebenza, uhlelo lokusebenza le-Google lingakubonisa ama-athikili ezindaba nolunye ulwazi mayelana nezintshisekelo zakho, njengemiphumela yezeimdlalo, ngokususelwe kumsebenzi wakho. Funda kabanzi
Uma uxhuma i-akhawunti yakho ye-Google kwi-Google Home yakho, ungaphatha ulwazi lwakho futhi wenze izinto ngomsizi we-Google. Isibonelo, uma ungeza imicimbi kwi-Google Khalenda yakho noma uthola uhlelo lwakho losuku, ucele izibuyekezo zesimo endizeni yakho elandelayo, noma uthumela ulwazi olufana nezinkomba zokushayela efonini yakho. Funda kabanzi
Idivayisi yakho ingaba nezinzwa ezingasetshenziselwa ukuqonda kangcono indawo yakho nokunyakaza kwakho. Isibonelo, i-accelerometer ingasetshenziselwa ukucacisa isivinini sakho ne-gyroscope ukuthola indawo oya kuyo mawuhamba.
Idivayisi ye-Android enezinhlelo zokusebenza ze-Google
Amadivayisi e-Android anezinhlelo zokusebenza ze-Google abandakanya amadivayisi athengiswa i-Google noma abanye ozakwethu okubandakanya amafoni, amakhamera, izimoto, okugqokekayo, nomabonakude. Lawo madivayisi asebenzisa amasevisi e-Google Play nezinye izinhlelo zokusebenza ezifakwe ngaphambilini njenge-Gmail, Amamephu, ikhamera yefoni yakho kanye nokokudayela kwefoni, ukuguqulela umbhalo ube inkulumo, okokufaka kwekhibhodi, nezici zokuphepha.
imiphumela yosesho eyenziwe ngokwezifiso
Isibonelo, uma ungene ngemvume kwi-akhawunti ye-Google futhi unike amandla isilawuli somsebenzi wewebhu nohlelo lokusebenza, ungathola imiphumela yosesho ehlobene kakhulu esuselwe kusesho lwakho lwangaphambilini nomsebenzi kusuka kumasevisi e-Google. Ungakwazi ukufunda kabanzi lapha. Futhi ungathola imiphumela yosesho eyenziwe ngezifiso ngisho noma uphumile. Uma ungafuni le leveli yokwenza ngezifiso yosesho, ungakwazi ukusesha futhi uphequlule ngokwemfihlo noma uvale ukwenza ngezifiso kosesho lokuphuma.
imithombo efinyeleleka ngokomphakathi
Isibonelo, singaqoqa ulwazi olutholakala esidlangalaleni kwi-inthanethi noma olusuka kweminye imithombo esesidlangalaleni ukusiza ukuqeqesha amamodeli olwimi a-Google nokwakha izici ezifana ne-Google Translate.
incike kumakhukhi ukuze isebenze kahle
Isibonelo, sisebenzisa ikhukhi elibizwa ngokuthi i-'lbcs' elenza kwazeke ukuhti ukwazi ukuvula i-Google Amadokhumenti kusiphequluli esisodwa. Ukuvimbela leli khukhi kuzogwema i-Google Amadokhumenti ekusebenzeni njengokulindelekile. Funda kabanzi
Uma ungeze inombolo yakho yefoni kwi-akhawunti yakho, ingasetshenziselwa izinhloso ezahlukene kuwo wonke amasevisi e-Google, kuye ngezilungiselelo zakho. Isibonelo, inombolo yakho yefoni ingasetshenziselwa ukukusiza ukuthi ufinyelele i-akhawunti yakho uma ukhohlwe iphasiwedi yakho, ukusiza abantu bakuthole futhi baxhumane nawe, nokwenza izikhangiso ozibonayo ukuthi ziphathelane kakhulu nawe. Funda kabanzi
inqubo yezomthetho noma isicelo sikahulumeni esiphoqelelayo
Njengezinye izinkampani zobuchwepheshe kanye nezokuxhumana, i-Google njalo ithola izicelo ezivela kohulumeni nezinkantolo emhlabeni wonke ukuze iveze ngedatha yomsebenzisi. Inhlonipho yobumfihlo kanye nekuvukeleka kwedatha oyigcina ne-Google isusa ukuphina indlela yethu yokuhambisana nalezi zicelo zomthetho. Ithimba lethu lezomthetho libuyekeza isicelo ngasinye, kungakhathaliseki uhlobo, futhi sivame ukubuyela emuva uma uma isicelo sibonakala sidlulela noma singalandeli inqubo elungile. Funda kabanzi kumbiko wethu ongenamfihlo.
Uma ubonisa izikhangiso ezenziwe ngezifiso, sisebenzisa izihloko esicabanga ukuthi ungazithanda ngokususelwe kumsebenzi wakho. Isibonelo, ungabona izikhangiso zezinto ezifana nokuthi "Ukupheka namarisiphu" noma "Ukuhamba emoyeni.” Asisebenzisi izihloko noma sobnise izikhangiso ezenziwe ngezifiso ngokususelwe ezigabeni ezizwelayo nengohlanga, inkolo, ezocansi, noma ezempilo. Futhi sidinga okufanayo kusuka kubakhangisi abasebenzisa amasevisi ethu.
izikhangiso ezenziwe ngezifiso
Futhi ungabona izikhangiso ezenziwe ngezifiso ngokususelwe kulwazi kusuka kumkhangisi. Isibonelo, uma uthenge kuwebhusayithi yomkhangisi, angasebenzisa lolu lwazi lokuvakasha ukukubonisa izikhangiso. Funda kabanzi
izikhangiso ozithola ziwusizo kakhulu
Ngokwesibonelo, uma ubuka amavidiyo amayelana nokubhaka ku-YouTube, ungase ubone izikhangiso eziningi ezihlobene nokubhaka njengoba uphequlula iwebhu. Futhi sisebenzisa ikheli lakho le-IP address ukucacisa indawo yakho elinganiselwayo, ukuze sikwazi ukukunikeza izikhangiso zesevisi ye-pizza eziseduze uma usesha i-“pizza.” Funda kabanzi mayelana nezikhangiso ze-Google kanye nokuthi kungani ungaboni izikhangiso ezinjalo.
Isibonelo, sicubungula ulwazi ukubika ukusetshenziswa kwezibalo kubaphathi abafanele mayelana nokuthi okuqukethwe kwabo kusetshenziwe kanjani kumasevisi ethu. Futhi singacubungula ulwazi lwakho uma abantu basesha igama lakho futhi sibonise imiphumelo yosesho kumasayithi aqukethe ulwazi olutholakala esidlangalaleni mayelana nawe.
kuvumelaniswe ne-akhawunti yakho ye-Google
Umlando wakho wokuphequlula we-Chrome ulondolozwa kuphela kwi-akhawunti yakho uma unike amandla ukuvumelanisa kwe-Chrome ne-akhawunti yakho ye-Google. Funda kabanzi
Isibonelo, sivumela abadali be-YouTube nabakhangisi ukuthi basebenze nezinkampani zokulinganisa ukuze bafunde mayelana nezethameli zamavidiyo abo e-YouTube noma izikhangiso, basebenzisa amakhukhi noma ubuchwepheshe obufanayo. Esinye isibonelo abathengisi emakhasini wethu wokuthenga, abasebenzisa amakhukhi ukuqonda kangcono ukuthi bangaki abasebenzisi abahlukile ababona uhlu lwemikhiqizo yabo. Funda kabanzi mayelana nalaba ozakwethu nokuthi balusebenzisa kanjani ulwazi lwakho.
qinisekisa futhi uthuthukise
Isibonelo, sihlaziya indlela abantu abasebenzisana ngayo nokukhangisa ukuthuthukisa ukusebenza kwezikhangiso zethu.
qinisekisa ukuthi amasevisi ethu asebenza njengokuhlosiwe
Isibonelo, sihlola ngokuqhubekayo amasistimu ethu ukubheka izinkinga. Futhi uma sithola okuthile okungalungile ngesici esithile, ukubuka ulwazi lomsebenzi oluqoqwe ngaphambi kokuthi inkinga iqale kusivumela ukulungisa izinto ngokushesha.
Kunamawebhusayithi angaphezu kwezigidi ezingu-2 okungewona e-Google nezinhlelo zokusebenza ezisebenzisana ne-Google ukubonisa izikhangiso. Funda kabanzi
Uma sithola ugaxekile, i-malware, okuqukethwe okungekho emethweni noma ezinye izindlela zokuhlukumeza kumasistimu ethu okwephula izinqubomgmo zethu, singakhubaza i-akhawunti yako noma uthathe isinyathelo esifanele. Kwezinye izimo, futhi singabika ukwaphula kuziphathimandla ezifanele.
Isibonelo, siqoqa ulwazi mayelana nokubuka nokusebenzisana nezikhangiso ukuze sikwazi ukunikeza abakhangisi imibiko ehlanginisiwe, njengokubatshela ukuthi ngabe sinikezele ngezikhangiso zabo ekhasini nokuthi ingabe isikhangiso sabonwa umbuki. Futhi singalinganisela okunye ukusebenzisana, njengokuthi uyihambisa kanjani imawusi yakho esikhangisweni kanye noma uma usebenzisana nekhasi lapho isikhangiso sivela khona.
ukuletha amasevisi ethu
Izibonelo zokuthi silusebenzisa kanjani ulwazi lwakho ukuletha amasezisi ethu zibandakanya:
Sisebenzisa ikheli le-IP elinikwe idivayisi yakho ukuthumela idatha oyicelile, njengokulayisha ividiyo ye-YouTube
Sisebenzisa izihlonzi ezehlukile ezilondolozwe kumakhukhi asedivayisi yakho ukusisiza sigunyaze njengomuntu okufanele athole ukufinyelela ku-akhawunti yakho ye-Google
Izithombe namavidiyo owalayisha ezithombeni ze-Google zisetshenziselwa ukukusiza ukuthi udale ama-albhamu, ukugcwayiza, nokunye ukudala ongabelana ngakho. Funda kabanzi
I-imeyili yokuqinisekisa indiza oyitholayo ingasetshenziselwa ukudala inkinobho “ngena” ebonakala ku-Gmail yakho
Uma uthenga amasevisi noma izimpahla kusuka kithi, ungasinikezela ngolwazi njengekheli lakho lokuhambisa noma imiyalo yokuletha. Sisebenzisela lolu lwazi ezintweni ezifana nokucubungula, ukugcwalisa, nokuletha i-oda lakho, nokunikezela ngosekelo ngokuxhumana nomkhiqizo noma isevisi oyithengile.
Ezinye izibonelo zokuthi silusebenzisa kanjani ulwazi lwakho ukusiza ugcine amasevisi ethu aphephile futhi ethembekile zibandakanya:
Ukuqoqa nokuhlaziya amakhasi e-IP nedatha yamakhukhi ukuvikela ekuhlukumezeni okwenziwe ngezifiso. Lokhu kuhlukumeza kuthatha izindlela eziningi, njengokuthumela ogaxekile kubasebenzisi be-Gmail, ukuntshontsha imali kubakhangisi ngokuchofoza kuzikhangiso ngokukhwabanisa, noma ukufihla okuqukethwe ngokuvula ukuhlasela kwe-Distributed Denial of Service (DDoS).
Isici “umsebenzi we-akhawunti wokugcina” ku-Gmail singakusiza uthole ukuthi uma futhi lapho othile afinyelele i-imeyili yakho ngaphandle kokwazi kwakho.. Lesi sici sikubonisa ulwazi mayelana nomsebenzi wakamuva ku-Gmail, njengamakheli e-IP afinyelele i-imeyili yakho, indawo ephathelene, kanye nedethi nesikhathi sokufinyelela. Funda kabanzi
Isibonelo, uma ungeza ikhadi lesikweletu noma enye indlela yokukhokha ku-akhawunti yakho ye-Google, ungayisebenzisela ukuthenga izinto kuwo wonke amasevisi ethu, njengezinhlelo zokusebenza ku-Google Play Isitolo. Futhi singacela ulwazi olungeziwe, njenge-ID yentela yebhizinisi, ukusiza ukucubungula inkokhelo yakho. Kwezinye izimo, futhi singadinga ukuqinisekisa ubunikazi bakho futhi sikucele ulwazi lokwenza lokho.
Futhi singasebenzisa ulwazi lokukhokha ukuqinisekisa ukuthi uyahlangabezana nezimfuneko zobudala, isibonelo, uma ufaka usuku lokuzalwa olungalungile ukukhombisa ukuthi awumdala ngokwanele ukuba ne-akhawunti ye-Google. Funda kabanzi
ulwazi mayelana nezinto eziseduzane nedivayisi yakho
Uma usebenzisa amasevisi endawo e-Google kwi-Android, singathuthukisa ukusebenza kwezinhlelo zokusebenza ezincike endaweni yakho, njengamamephu e-Google. Uma usebenzisa amasevisi endawo e-Google, idivayisi yakho ithumela ulwazi ku-Google mayelana nendawo yayo, izinzwa (njenge-accelerometer), namathawa eseli aseduze nezindawo zokufinyelela ze-Wi-Fi (njengekheli le-MAC namandla esignali). Zonke lezi zinto zisiza ukucacisa indawo yakho. Ungakwazi ukusebenzisa izilungiselelo zedivayisi yakho ukunika amandla amasevisi endawo ye-Google. Funda kabanzi
umsebenzi wakho kwamanye amasayithi nezinhlelo zokusebenza
Lo msebenzi ungavela ekusebenziseni kwakho amasevisi e-Google, njengokusuka ekuvumelaniseni i-akhawunti yakho ne-Chrome noma ukuvakasha kwakho kumasayithi nezinhlelo zokusebenza ezisebenzisana ne-Google. Amawebhusayithi amaningi nezinhlelo zokusebenza ezisebenzisana ne-Google ukuthuthukisa okuqukethwe kwazo namasevisi. Ngokwesibonelo, iwebhusayithi ingase isebenzise amasevisi ethu okukhangisa (njenge-AdSense) noma amathuluzi okuhlola (afana ne-Google Analytics), noma kungase ashumeke okunye okuqukethwe (okufana amavidiyo e-YouTube). Lawa masevisi abelana ngolwazi mayelana nomsebenzi wakho ne-Google futhi, kuncike kuzilungiselelo zakho ze-akhawunti kanye nemikhiqizo esebenzayo (isibonelo, uma uzakwethu asebenzisa i-Google Analytics ngokuhlangana namasevisi ethu okukhangisa), le datha ingahlotshaniswa nolwazi lomuntu siqu.
Funda kabanzi mayelana nokuthi i-Google iyisebenzisa kanjani idatha uma usebenzisa amasayithi nezinhlelo zokusebenza zozakwethu.
Isibonelo, ulwazi olumayelana nokusatshiswa kwezokuvikela lungasisiza ukuba sikwazise uma sicabanga ukuthi i-akhawunti yakho isengozini (lapho singakusiza ukuthi uthathe izinyathelo zokuvikela i-akhawunti yakho).
Isibonelo, sisebenzisa amakhukhi ukuhlaziya ukuthi abantu basebenzisana kanjani namasevisi ethu. Nokuthi ukuhlaziya kungasisiza ukwakha imikhiqizo engcono. Isibonelo, kungasisiza ukuthola ukuthi kuthatha abantu isikhathi eside ukuqedela umsebenzi othile noma nokuthi banezinkinga ngokuqedela izinyathelo. Bese singadizayini kabusha leso sici nokuthuthukisa umkhiqizo kuwo wonke umuntu.